Confucius ကွန်ဖြူးရှပ် ဇာတိမြို့ ခရီးအမှတ်တရ (၂-က) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » Confucius ကွန်ဖြူးရှပ် ဇာတိမြို့ ခရီးအမှတ်တရ (၂-က)
Confucius ကွန်ဖြူးရှပ် ဇာတိမြို့ ခရီးအမှတ်တရ (၂-က)
Posted by weiwei on Nov 25, 2010 in Photography, Travel |5comments
ကွန်ဖြူးရှပ် ဘုရားကျောင်းအတွင်းမှ ပင်ပအဆောင်
အ၀င်ဝက ကျောက်နဲ့ထွင်းထားတဲ့ ဘုရားကျောင်းမြေပုံ
သားစဉ်မြေးဆက် မျိုးဆက်ပေါင်း (၄၂) ဆက်ထိ ကဗျည်းကျောက်တိုင်များ
ကွန်ဖြူးရှပ် ဘုရားကျောင်း (Confucius Temple) (孔子庙)ပါ။ တရုတ်ပြည်နဲ့ တခြား ထိုင်ဝမ်၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားတွေမှာလဲ ကွန်ဖြူးရှပ်ဘုရားကျောင်းတွေရှိပေမယ့် ဒီနေရာကတော့ အားလုံးထဲမှာ အကြီးဆုံးနဲ့ ရှေးအကျဆုံးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းကို ဘီစီ 478 ကွန်ဖြူးရှပ် သေဆုံးပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ အမှတ်တရ ဆောက်လုပ်ပြီး ကွန်ဖြူးရှပ်ကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကွန်ဖြူးရှပ်က ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တော့မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့ အယူဝါဒ၊ အတွေးအခေါ်နဲ့ အဆုံးအမတွေက တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တွေ၊ တရားသူကြီးတွေနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက် အကျိုးရှိလို့ သူ့အယူဝါဒတွေကို တလေးတစားလိုက်နာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဘုရားကျောင်းက ဧက ၃၂၇.၅ ရှိပြီး မြောက်မှ တောင်သို့ ၁၁၂၀ မီတာရှည်ပါတယ်။ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံစံ ခြံဝင်းအတွင်းမှာ အကွက်ပေါင်း ၉ ကွက်နဲ့ အဆောင်ပေါင်းများစွာ ဆောက်လုပ်ထားတာ ရှေးဟောင်းနန်းတော်ကြီးတစ်ခုထဲကို ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ အရမ်းပူတဲ့ ဇူလိုင်လမှာသွားပေမယ့် အေးမြတဲ့ခံစားချက်ကို ရပါတယ်။ မနက် (၁၀) ကနေစပြီး မနားတမ်းလမ်းလျှောက်ကြည့်တာတောင် နေ့လည် (၂) နာရီမှ အဲဒီကနေ ပြန်ထွက်လာနိုင်တယ်။ ခြေထောက်လဲညောင်း ဗိုက်လဲဆာပေါ့။ ဓါတ်ပုံတွေက များလွန်းလို့ (က) (ခ) နှစ်ပိုင်း ခွဲလိုက်ပါတယ်။
ကွန်ဖြူးရှပ် အဆိုအမိန့်ထဲက ထင်ရှားတာ တချို့ကတော့ …
မိမိအမှားကို သိမြင်ပြီး ပြုပြင်နိုင်တာဟာ အမြင့်မြတ်ဆုံး ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ပါတယ် …
ကိုယ်မလုပ်ချင်သောအရာ (ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အလုပ်)ကို သူများကိုလဲ မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ ..
စားစရာ ဆန်ကြမ်းထမင်း၊ သောက်ဖို့ရေနဲ့ မှေးအိပ်စရာလက်မောင်းတစ်ခု ရှိရင် မပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးလား? ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပကာသနတွေကို မတရားသဖြင့် ရှာဖွေစုဆောင်းထားသူတွေအတွက်တော့ အဲဒါတွေက လွှင့်နေတဲ့ တိမ်တွေလိုပဲတဲ့ ..
ဗဟုသုတဆိုတာ သင်ဘာတွေကိုသိလဲဆိုတာနဲ့ သင်ဘာတွေမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို စုစည်းထားခြင်းပါပဲ …
တစ်နေ့တာသင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းက ပျော်စရာမကောင်းဘူးလား? အဝေးမှ သူငယ်ချင်းရောက်လာခြင်းကလဲ ကြည်နူးစရာမဟုတ်လား? တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အထင်လွဲပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှ စိတ်မဆိုးတတ်သူသည် ရိုသေလေးစားစရာအကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပေဘူးလား?
တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်ကြည့်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ် အဆိုအမိန့်ပေါင်းများစွာရှိပါသေးတယ် …
အပိုင်း (ခ) မှာ ဆက်လက်အားပေးကြပါအုန်း …
စားစရာ ဆန်ကြမ်းထမင်း၊ သောက်ဖို့ရေနဲ့ မှေးအိပ်စရာလက်မောင်းတစ်ခု ရှိရင် မပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးလား?
မဝေရေ ကွန်ဖြူးရှပ် တီဗီဂိမ်းမကစားဘူးလို့ပြောခဲ့တာ
“စားစရာ ဆန်ကြမ်းထမင်း၊ သောက်ဖို့ရေနဲ့ မှေးအိပ်စရာလက်မောင်းတစ်ခု ရှိရင် မပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးလား? ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပကာသနတွေကို မတရားသဖြင့် ရှာဖွေစုဆောင်းထားသူတွေအတွက်တော့ အဲဒါတွေက လွှင့်နေတဲ့ တိမ်တွေလိုပဲတဲ့”
အရမ်းကြိုက်တယ်။ မြန်မာမှာဒါမျိုးတွေ အများကြီးပဲ။
လွှင့်နေတဲ့တိမ်လိုပဲဆိုတာ ပိုပြီး ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်။
ဘာသာပြန်တာတိုက်ရိုက်ပြန်မိတော့ ခပ်တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်သွားတယ် ..
လွှင့်နေတဲ့တိမ်ဆိုတာကတော့ ခဏတာပဲ အမြဲမဟုတ်ဘူး … အမြဲဆုတ်ကိုင်ထားလို့ မရတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် …
ကောင်းစွတကား။ မဝေရေ အစားအသောက် အကြောင်းလေး လဲရေးပေးပါဦး။ ကျော်ကြားတဲ့ အစားအစာ။ နောက်ပြီး ကြေးအိုးတို့ ဆီချက်တို့ ရှိမရှိ။တူမတူ။ စိန့်တိုင်းမှ နှမတယောက် ချမ်းသာပကတိ ကျန်းမာစွာရှိပါစေ။